विजय लामा भन्नुहुन्छ : कुलमान हुँदा नभएको लोडसेडिङ अहिले किन ? – yuwa Awaj
विजय लामा भन्नुहुन्छ : कुलमान हुँदा नभएको लोडसेडिङ अहिले किन ?
चैत्र ७, २०७७ शनिबार 5
काठमाडौ : नेपाल एअरलाइन्सका वरि’ष्ठ पाइलट विजय लामाले नेपाल विद्युत प्राधि’करण देशमा बिस्तारै लो’डसेडिङ गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् ।
अहिले लोड’सेडिङ सुरु नै भइसकेको भन्दै लामाले यो बिस्तारै बढ्दै जाने बताए । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राधिकरणमाथि आ’क्रोश पोखेका छन् । कारण देखाउँदा सुख्खा याम भएकोले पानीको सतह घटेर भन्ने गर्छन् प्रा’धिकरणको हाकिम साबले
भन्दै उनले आ’क्रोश पोखेका छन् । प्राधि’करणलाई लामाको प्रश्न छ, ‘के कुलमान घिसिङको पालामा चाँही सुख्खा याम लागेन ? अनि पानी टन टना टन हुन्थ्यो हो ? प्रकृति अनि भाग्यले मात्र साथ दिएको हो त कुलमानलाई ?’ अबको केही समयमा इन्भ’र्टर अनि जेनेरेटर माफियाहरु स’ल्बलाउने उनले अनुमान गरेका छन् ।
यही अवस्था जारी रहे अब फेरि जनता र देशलाई पुरानै अवस्थामा पु¥र्याउन सक्ने लामाको भनाइ छ ।लामा लेख्छन्, ‘अबको केही समयपछि फेरि इन्भ’र्टर अनि जेनेरेटर माफि’याहरु सल्ब’लाएर आउदैंनन् अनि जनतालाइ पुरानै ठाउमा पुराउँदैनन् भन्न सकिन्न ।
यही चालाले पु¥र्याउनु समय लाग्दैन ।’ अहिले जनताले जे पनि चुप’चाप सहने भइसकेको लामाको भनाइ छ ।जे पनि चुप लागेर सहने भएकाले जनता भनेको के हो पनि बुझ्नै गाह्रो भैसकेको उनले बताए । लामा थप लेख्छन्, ‘हुन त के नै गर्न या बोल्न सकिन्छ, जुन देशमा शीर्ष नेताहरुलाई झगडा गर्नमा नै फु’र्सद छैन । झै’झ’गडा गर्न रोकेर देश विकासका काम कुरा पो गर्ने कि ?
Prevमाधव नेपाल सहित भिम रावल, राम कुमारीलाई एमालेले गर्यो यस्तो कार’वाही !
Nextखोप लगाएको दुई दिनपछि नै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खानलाई कोरोना सङ्क्रमण
वार्तामा आउन तयार छौ,तर वार्ता खुलामञ्चमा हुनुपर्छ, दिल्ली,बेइजिङमा हैन – विप्लव
कुलमानलाई ‘हिरो’ बनाएको त्यो लक्ष्मी पूजा, जहाँबाट सुरु भयो लोडशेडिङमुक्त नेपाल…हेर्नुहोस् ।
पारिजातले यस्ता समस्या देखि दिलाउँछ छुटकारा…हेर्नुहोस् ।